သောသီခို: RaU အနုပညာရှင်အဖွဲ့အား “The Kachin Civilian Defender” ဆု ချီးမြှင့်
RaU အနုပညာရှင်အဖွဲ့အား “The Kachin Civilian Defender” ဆု ချီးမြှင့်
ယခုနှစ်အတွက် “The Kachin Civilian Defender” ဆု ကို ကချင်စစ်ဘေးသင့်များအား ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နေသည့် “RaU” ကချင်အနုပညာရှင် အဖွဲ့အား ဥရောပနိုင်ငံများရှိ ကချင်အမျိုးသားများက ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ (၅၁) နှစ်ပြည့် ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့ တွင် ချီးမြှင့်လိုက်သည်။
“တော်လှန်ရေးလုပ်သွားခဲ့ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို အရိုအသေထားတဲ့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းက မြန်မာအစိုးရ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက် ပြည်သူကြားထဲကနေ အချင်းချင်း အကာအကွယ်ပေးဖို့ ရဲဝံ့တဲ့သူ တစ်ဦးချင်း ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်လာကြသူကို ချီးမြှင့်တာဖြစ်တယ်” ဟု ဆုချီးမြှင့်သည့်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူ ဆလန် ခွန်ထွယ်ပြောသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံရောက်ရှိနေသူများက ပြည်တွင်းတွင် ပြည်သူများဘက်မှ ရပ်တည်ကာ ခုခံကာကွယ်ပေးကြသူများကို ထောက်ခံအားပေးသည့် အနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
"အရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ ကျနော်တို့ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ အခုလိုဆောင်ရွက်တာကို ကြည့်ပြီးခွန်အားရပြီး ကျနော်တို့ကိုအခုလိုချီးမြှင့်တာဆိုရင် ပိုပျော်တာပေါ့၊ ဆက်ပြီးတော့ ပိုလုပ်ရမယ်လို့လည်း စိတ်ထဲရှိလာတယ် ပိုအားရှိလာတယ်" ဟု “RaU” ကချင်အနုပညာရှင်အဖွဲ့ဝင် တဦးပြောသည်။
Rau, yak tim pyaw tim "ဆင်းရဲလည်း/ဝမ်းသာလည်း အတူတူ" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော အဖွဲ့သည် ယခင်နှစ်သြဂုတ်လတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ကျင်းပ၍ ကချင်စစ်ဘေးသင့်သူများအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရာမှ စတင်လာသည့် အနုပညာရှင် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
၎င်းတွင် နာမည်ကျော် အဆိုတော် မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်လ်၊ ဒီဇိုင်းနာ၊ ပန်းချီဆရာ စသည့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှ ကချင်အနုပညာရှင်များ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
ထို Kachin Artisan Network (ကချင်အနုပညာရှင်) အဖွဲ့မှ အသင်းဝင်အနုပညာရှင်များ၏ ထည့်ဝင်ငွေဖြင့် Yak Tim Pyaw Tim "RaU" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကချင်ဘာသာ VCD သီချင်းစီးရီး ထုတ်ဝေကာ ရောင်းချရငွေများကို စစ်ဘေးသင့်သူများအား ပေးလှူလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်တွင်းအပြင် ၂၀၁၂ နှစ်ကူးပိုင်းတွင် စင်္ကာပူ၊ မလေးရှားစသည့် ပြည်ပနိုင်ငံများတို့ သွားရောက်ကာ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲများဖြင့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေ၍ ကချင်ဒုက္ခသည်များကို ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုလာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ရန်ကုန်မြို့မျှော်စင်ကျွန်း၌ ပြုလုပ်မည့် ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ကချင်အဆိုတော်များ၏ ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင်လည်း "RaU" အဖွဲ့မှ ပါဝင်ကူညီသွားရန်ရှိသည်ဟု အဖွဲ့ဝင်တဦး ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
"The Kachin Civilian Defender" ဆုကို ၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ချီးမြှင့်လာရာ ကချင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသတွင် လယ်ယာမြေသိမ်းခံရသူ ဒေသခံကချင်ပြည်သူများအတွက် အကာအကွယ်ပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုအတွက် ဖားကန့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ပါတီမှ ဒေါ်ဘောက်ဂျာအား ပထမအကြိမ်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Posted by ဇင်ယော် at 1:47 AM
နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးသည့်အခါ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ...
တရေးနိုးတဲ့ညတွေ မှောင်နေဆဲ (ဆောင်းပါး)
နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် အားလုံးပါ...
တိုင်းရင်းသားချင်းဖဲ့ထုတ်စည်းရုံးမှု အား KNU လက်မခံ...
They Don't Want Democracy. They Want Freedom.
21 ရာစုမှ သမိုင်းအမှန်ကိုဖျက်မည့် အမျိူးသားသစ္စာဖေါ...
ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့ KNPP တို့ အပစ်အခ...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 25 Feb 212
DKBA နှင့် အစိုးရတို့၏ လက်နက်ကိုင် ပဋ္ဋိပက္ခ မဖြစ်ရေး...
YPI – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒေါ်အင်ဖန်ဂျာရာ ပြောခဲ...
အရှိကို အရှိအတိုင်း အဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်း ရိုးသားစွ...
The Fate of Myitsone:
အာရှ၏ နောက်ကျားတကောင် (သို့) ဗီယက်နမ် တိုးတက်ရခြင်...
RFA Karen Language Program, Feb 4th week, 2012
ကရင့်ရေးရာ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲကြီး စတင် ကျင်းပရန်ရှိ
BGF သိမ်းသည့် လက်နက်များ DKBA ပြန်ရ
Umpiem Mai Refugee Camp fire, Tak province, Thaila...
အုန်း​ဖျန် မီး​ဘေး​ဒုက္ခသည်များ​ ​နေစရာအခက်အခဲ ကြုံ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကချင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်
If I could have one thing back the SPDC took from ...
ယမန်နေ့ မှ ကနေ့ အထိ မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် သျှမ်းပြည...
အုန်းဖျန် ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်ကျွမ်းမှု(ရုပ်သံ)
အစိုးရနဲ့ရယူထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး DKBA ဘက်ကဖျက်သိမ်း
အဖွဲ့အတွင်း တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု လတ်တလော ထွ...
CNN မှာ တွေ့ရတဲ့ နေပြည်တော် မြင်ကွင်း
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 23 Feb 2012
လစာတိုးမြင့်ရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ FTUB နိုးဆော်ချက်
KNU ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံးနှင့်မြန်မာအစိုးရအကြား ...
Why we lose (ရဲဇာနည်)
၀န်ထမ်းများလစာ တိုးမြင့်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ FTUB သ...
ကရင့်အမျိူးသားရေး လှုပ်ရှားမှု လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ ရေ...
CSS/SSA ၏ သီပေါမြို့ နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူး နှင့်ဇနီး...
Shan Nationalities Day at Loi Tai Leng
နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ DKBA တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်
ကရင်အင်္ကျီဝတ်ပြီး ဒေါ်စုနဲ့တောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ယူနိုင...
မောင်ချစ်သူ၊ ဖားနွီး လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွ...
အပစ်ရပ်ထားစဉ် အစိုးရတပ်များ တိုးချဲ့ထားဟု ကေအန်ယူဆို
Dawei (Tavoy) Development or Destruction by Kwe Ka Lu
ဘိတ်ထားဝယ်ခရိုင် ဒေသခံတွေက ထိုင်း-အီတလီ ကုမ္မဏီကို ...
ကရင်အမျိူးသားဘာသာရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ သဘောထ...
မြန်မာပြည်တွင်းကရင်အမျိုး သားရေးရာ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့
Kachin IDP Update
Karen National Day 2012 (ဘိတ်ထားဝယ်ခရိုင်)
Jinghpo Manau Festival, Southwest China, Yunnan Fe...
အကြီးဆုံးကချင် အသင်းတော်မှ ကချင် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်...
Zarganar at NY
The uneasy birth ofaceasefire
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းကို သက်သေခေါ်ဖို့ မန်းငြိမ်းမော...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 16 Feb 2012
သတ်မှတ်ချိန် အတွင်းမြန်မာအစိုးရ နှင့် တွေ့ရန် မသေခ...
Burma’s largest Kachin faith group prays for freed...
RaU အနုပညာရှင်အဖွဲ့အား “The Kachin Civilian Defend...
Myanmar: Ceasefire does not mean peace
တိုင်းရင်းသားများအတွက် သေရေး ရှင်ရေး အချိန်ကာလ
ပဒိုမန်းရှာ (သို့မဟုတ်) ချစ်သူများနေ့မှာ အမှတ်ရတဲ့သူ
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အမှု တရားဥပဒေအရသာ အကာအကွယ်ယူသွားမည်
ပဒိုမန်းရှာ ၄နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားနှင့်...
Statement From Phan Foundation
SSA: How long the ceasefire will last up to Naypyitaw
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 13 Feb 2012
အစိုးရစစ်တပ်က ရိက္ခာတင်ကား အပြင် လက်နက်ခဲယမ်းတင်ကား...
ချစ်သားသို့(ပဒိုမန်းရှာ အမှတ်တရ)
RFA TV February 13, 2012
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ ပင်လုံညီလာခံအပေါ် သုံ...
KNU တပ်မဟာ(၆)တွင် ၆၄နှစ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားနေ့ စည...
အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေး လက်ချက်နဲ့ သေဆုံးသူ တော်လှန်ရေ...
ညီနောင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ စုပေါင်း ကျင်းပသည့် ...
ကျောင်းသားတွေ သဘောတူတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်သစ်
အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးကာလ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ကေအဲန်ယူ...
အီးမေးမှ လက်ခံရရှိတဲ့ အကြံပြုစာတစ်စောင်
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - 10 Feb 2012
၆၄ နှစ်မြောက်ကျရောက်သော ကရင့်အမျိူးသားနေ့ တွင် ကေအ...
စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူများကို ကူညီရန် ကချင်အနုပညာသည်မျာ...
ပဒိုစော သမိန်ထွန်း ပြောပြသော ကရင့်တော်လှန်ရေးသမိုင...
ပင်လုံအသစ်တွင်ဖို့ မလိုဘူး (ရုပ်သံ)
ပြည်ပတွင် ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့ အလေးအနက် ကျင်းပ
ပဒိုအောင်ဆန်း သဘောထား (ပေးစာ)